Q-7aad shandaranley – dhugasho
maxamedsheekafguun Janaayo 28, 2019 sheekooyin, Story
Desert sand dunes, Wahiba Sands.
Wuxuu dabo socdaba goor makhribkii ah, ayaa la soo gaadhay aqalladii awrtu ka dareertay, galgalin aqallada ka yara durugsan ayaa awrtii lagu yara ha kiyay.
Dabadeedna afartii dhallinyarada ahaa, ayaa labo labo isugu qoor laabtay, oo haasaawe falkiyay, iyaga oo ay labadiiba geed dugsigii isla istaageen. Balayax wuxuu u soo yara dhawaaday cudbi iyo wiilkii la taagnaa, hayska oo madoobaaday awgii, ayaa u saamaxay inaan muuqiisa la arag, isaga oo aad ugu dhaw meesha ay labada qof taagan yihiin.
Goortii ay cabbaar wada joogeen ayay cudbi iyo wiilkii la taagnaa is macsalaameeyeen, oo midba gees u dhaqaaqay. Cudbi waxa ay u dhaqaaqday dhinici aqalkooda, oo wax yar u jiray, balse, markii ay wax xoogaa sii socoto ayuu balayax oo sidii qof wax gaadaya oo kale u shanqadh tiranaya, oo cidh baha ku socda wuxuu soo gaadhay cudbi oo aayar sii socota.
Dabadeedna, intuu garabka bidix ushiisi ka taabsiiyay ayuu isaga oo hoos u hadlaya ku yidhi; “Naa cudbi waa balayaxe, maxaad sheegatay?” Cudbi intay bahal naxdin ah dib dib u guratay, oo haddana yaabtay ayay ku tidhi; “Waar waa nabade, xilligan xaggee Alle kaa keenay? Maxaadse doonaysaa? Ma baadi doon baa tahay? Cajiib!”
Balayax oo doonaya inuu fursaddaa yar ka faa’idaysta, ayaa intuu afka u soo dhaweeyay cidbi ku yidhi; “Naa mayee, baadi aan adiga ahayn igama maqnee, kaalay halkan ina yara jooji aynu is waraysanee”. Cudbi intay dareen dhiillo leh muujisay, oo walwashay ayay ku tidhi: “Waar heedhe, malaha waa lagu sitaaye, haddii lagu arko waa lagu dilayaaye, imikana waa la ina arkayaaye, bal anigaa kuu soo bixiye geedkaa hoostiisa ku sii dhuumo oo yaan lagu arkin…”. Balayax wuu aqbalay. Markii ay sii dhaqaaqaysayna wuxuu ka daba tuuray; “Soo dhakhso…Soo dhakhso…”.
Cudbi iyada oo fajacsan oo dhabannada haysata ayay gurigii tagtay, kadibna intay dhabanka iyo gacanta isa saartay ayay fikirtay. Waxa ayna maskaxdeedu cabbirtay halista uu balayax ku sugan yahay iyo ballantii ka dhaxaysay wadneheeda ayaa aad u shaqeeyey, oo si xawli ah ayuu dhiigeedu jidhka ugu wareegay.
Balse, go’aankii ay gaadhi lahayd ayay jaanis u wayday, waayo hooyadeed dhool oo xerada adhiga ku jirta, ayaa aragtay iyada oo isla maqan, ka dibna intay cod dheer ku soo jeedisay, ayay ku tidhi; “Naa maxaad la dhaygagsan tahay, maad maqashan mareegta nagaga xidh xidhid?” Cudbi ood mooddo qof sasay, ayaa intay boodday, oo aqalkoodii oo madaw gashay, dabkii docda afuuftay, markii uu dabkii olalayna, intay dhiil yar oo shiike ah soo qaadday, ayay caano may-dhanaan ah ka buuxisay, oo ay dadkii iska dhawrtay ayay muska aqalkooda ka dambeeya ku xasaysay.
Dabadeedna waxa ay billawday maqal xidh xidhid iyo adhigi oo ay u gasho, balayax wuxuu halkii dhabbacnaadaba, wakhtigii baa ku dheeraaday, siduu xagga guriga u soo dhawrayay, ayay indhihii daaleen. Rafasho ayaa ka dhammaatay, siduu marba isku moodsiinayay madatuusha dhirta, ee isku lahaa waatan soo madaw, ee uu kolba hanqalka ula soo boodayay…
Silsiladii dabargoynta qabyaaladda